Tirinta Codadka Doorashada Kenya Oo Maalintii Seddaxaad Gashay Iyo Wararkii u Dembeeyey Ee Xaallada Dalkaas + Muuqalo sawiro Ah | Marsa News
Tirinta Codadka Doorashada Kenya Oo Maalintii Seddaxaad Gashay Iyo Wararkii u Dembeeyey Ee Xaallada Dalkaas + Muuqalo sawiro Ah
August 10, 2017 - Written by editor marsan
Hargaisa:(Marsanews) Tirinta codadka doorashadii Talaadadii ka dhacday dalka Kenya ayaa wali socoto iyadoo madaxweynaha haatan xilka haya, Uhuru Kenyyatta uu hoggaaminaya natiijooyinka hordhaca ah ee ilaa iyo hadda soo baxay. Ilaa iyo hadda 54% codadkii la tiriayay ayuu helay Kenyatta halka hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga uu helay 44%.
Wariye BBC-da ka tirsan oo ku sugan magaalada Kisumu ayaa soo tabiyey in Arbacadii uu arkay boqolaal qof oo muhaadaraad ka dhigay xaafad ka tirsan magaalada kuwaasi oo ku dhawaaqayay “Raila la’aantiis, nabad ma jirto”, balse markii dambe ay booliiska kala eryeen.
Mucaaradak ayaa natiijada la baahiyay ku tilmaamay been abuur sabtoo ah natiijada ma wehelin foomamka xarumaha codaynta ee loo yaqaano foom 34A iyo 34B. “Waa khiyaali ,waa been abuur,”ayuu ku nuuxnuuxsaday Mr Odinga.
Odinga ayaa shaki ka muujiyay in uu cabsi ka qabo in lagu shubto Si uu musharaxu ugu guulaysto jagada madaxwaynaha wareega kowaad, waxaa looga baahan yahay boqolkiiba 50 lagu daray 1(50+1)oo ka mid ah codadka la dhiibtay.